Al-Shabaab oo fagaare ku yaalla Fiidow ku toogtay Guddoomiyihii xaafadd ka tirsan Jowhar – Hornafrik Media Network
Al-Shabaab oo fagaare ku yaalla Fiidow ku toogtay Guddoomiyihii xaafadd ka tirsan Jowhar
Cali Cabdullahi gudoomiyahii xaafada Buulo-sheikh oo ka mid ah afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hir-Shabeelle ayaa shalay lagu toogtay fagaare ku yaalla deegaanka Fiidow oo ay maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Sida la xaqiijiyay gudoomiye Cali ayaa tagay deegaanka Fiidow mudo bil ka hor isagoo marqaati fur u ahaa garab ka mid ah dad ay ka dhexeysay dacwad oo garsoor u doontay maxkamadda ay Al-Shabaab ku leeyihiin Fiidow.
Intii ay socotay dhageysa dacwada ayaa la sheegay in gudaha maxkamadda ay soo galeen dagaalamayaa hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo fadhiga maxkamadda ka kaxeystay marxuumka, iyagoo dadkii ku sugnaa goobta dacwadda lagu qaadayay ku wargiliyay Cali uu ka tirsanyahay maamulka Hir-Shabeelle, sidaas darteedna uusan noqon Karin marqaati sida ay sheegeyso xogta aaan helnay.
Muddo bil ah oo uu ku xirnaa Fiidow ayaa Shabaab waxa ay shalay fagaare ku yaalla deegaanka is kugu yeereen dadkii ku dhaqnaa, iyagoo halkaas ku toogtay guddoomiyihii xaafadda Buulo-Sheikh oo ka tirsan degmada Jowhar.
Dadka Tunusia oo u dareeray wareegga labaad ee doorashadda Madaxtooyada
Abaabulka dibad-baxyo ka dhan ah Axmed Madoobe oo ka socda Garbahaarey